Facebook Marketing | SEO | SEM | Niche Market | Web Development
+95 (09) 4210 140 55
Mon - Sat:9AM -5PM, Sunday: CLOSED
Facebook Page ကို Like လုပ်ထားပြီး ကျွန်တော်တို့နဲ့ အမြဲထိတွေ့မှုကို ရယူနိုင်ပါတယ်။
Myanmar Digital Marketing
- Open More Online -
Open More Online
ဝန်ဆောင်မှုတိုင်းအတွက် 10% Promotion Plan ရရှိမယ့် Discount Applied Form ကို အခုပဲ ဖြည့်စွက်လို့ရပါပြီ။
We are Myanmar
ကျွန်တော်တို့သည် တိုးတက်မှုနှေးကွေးခဲ့သော ကာလနှင့် ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးစာရင်းတွင် နှစ်ကာလ ရှည်ကြာစွာ အနည်ကျနေခဲ့ရသည်။
ယနေ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် ခေတ်ကာလသို့ အသွင်ပြောင်းလာချိန်တွင် အခွင့်အလမ်းများစွာတို့ကို အမိအရဆုပ်ကိုင်လျက် ကမ္ဘာနှင့် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ရန် အခါသင့်လာပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာသွေးချင်းအားလုံး လက်တွဲညီညာစွာဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကွန်ရက်တစ်ခုဖန်တီးရန် လိုအပ်ပါသည်။
၂၁ ရာစု၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် ခေတ်ပြောင်းကာလကို ဖြတ်သန်းနေသည့် အားလျော်စွာ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်ဘဝတွင် မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် အင်တာနက်က အရှိန်အဟုန်ကောင်းစွာ ဝင်ရောက်လာပြီး သန်းနှင့်ချီသော လူထုသည် အင်တာနက် ပလက်ဖောင်းများပေါ်၌ တနေ့ထက်တနေ့ နေရာယူလာကြသည်။
အသက်အရွယ် အဖုံဖုံ၊ လူတန်းစား အမျိုးမျိုးတို့သည် အင်တာနက်နှင့် ခွဲမရခွာမနိုင်အောင် ဆက်အပ်သွားကြပြီး တစ်နေ့တာ၏ အပန်းဖြေခြင်း၊ လေ့လာသင်ယူခြင်း၊ ဈေးဝယ်ခြင်းမှစ၍ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ခြင်းများအထိ အချိန်များစွာကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆန်စွာ ကုန်ဆုံးလျက်ရှိသည်။
မိတ်ဆွေသည် မည်သို့သော အလုပ်အကိုင်နှင့် နေထိုင်ရှင်သန်သူဖြစ်စေ၊ မားကတ်တင်းနှင့် ဆက်အပ်နေသည်ချည်း ဖြစ်၏။
ကျွန်တော်တို့ မိခင်ဝမ်းမှကျွတ်စဉ် ငိုယို၍ နို့ချိုတိုက်ကျွေးရန် မာကတ်တင်းဆင်းစဉ်မှစလို့ ယနေ့ချိန်ခါထိ မိမိ၏ အလိုဆန္ဒကို လိုက်လျောရန် တိုက်တွန်းစကားပြောနေခြင်း အားလုံးသည် မာကတ်တင်းတွင် အကျုံးဝင်သည်ချည်းသာ ဖြစ်သည်။
တီထွင်ဆန်းသစ်သော မာကတ်တင်းသည် သာလွန်အကျိုးများသော ရလဒ်ကို ပေးစွမ်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
KNOWLEDGE SHARING NETWORK ဖြစ်သော HAPEYE.NET မှ တစ်ကိုက်စာ (တစ်ခါဖတ်စာ) စာပေများကို နေ့စဉ် တင်ဆက်ပေးနေပြီး မိမိတို့သည် မျှဝေခြင်းကို ဗဟိုပြု၍ သိမှုဆိုင်ရာများ တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဘဝတိုင်းကို သန်မာစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်နေထိုင်မှု စနစ်အတွင်းသို့ မှန်ကန်ထိရောက်သော မားကတ်တင်းနည်းလမ်းဖြင့် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ရန်အတွက် Myanmar Digital Marketing မှ အသင့်ရှိနေပါပြီ။
Facebook မှ ကုမ္ပဏီ အမှတ်တံဆိပ် အသစ်ကို မိတ်ဆက်ခြင်း
Social Media Marketing / 06 Nov 19 /0comments
တခါတုန်းက Facebook ကလည်း Web တခုသာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နောက်မှာ App တခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ နှစ်အနည်းငယ် အတွင်းမှာ ကုမ္ပဏီက မြန်မြန်ဆန်ဆန် ကြီးမားလာပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Facebook Groups အတွက် Units တွေကို ဘယ်လို ဖန်တီး အသုံးချမလဲ ?
Social Media Marketing / 06 Oct 19 /0comments
သင့်ရဲ့ Facebook Group ထဲမှာရှိတဲ့ ပို့စ်တွေကို အစီအစဉ် ကျကျနန ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ ဖတ်ရလွယ်အောင် ထားချင်ပါသလား။
Blogger တိုင်း သိထားသင့်တဲ့ အဆင့်မြင့် SEO နည်းဗျူဟာ (၁၂) ချက်
SEO & SEM / 03 Sep 19 /0comments
Digital Marketing လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဘယ် Online Platform ကိုသုံးသုံး အဆင်ပြေပါတယ်။ အရေးကြီးတာက SEO လို့ခေါ်တဲ့ Search Engine Optimization ပါ။ အဲ့တော့ က
Travel Website ကို အရောင်းမြှင့်တင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း (၅)ချက်
SEO & SEM / 01 Aug 19 / 1 comment
ယခုခေတ်မှာဆိုရင်ဖြင့် Online ပေါ်ကို Website တွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု တိုးပေါက်လာပါပြီ။ Online ခရီးသွား အေဂျင်စီတစ်ခုအနေဖြင့် ၎င်းရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို
Social Media Marketing / 01 Aug 19 /0comments
Digital Marketing ဆိုတာ ဘာလဲ..
Social Media Marketing ထံသို့ 1 မိနစ်စာ ကူးခတ်ခြင်း
Social Media Marketing / 29 May 19 /0comments
Digital Marketing ဆိုတာဘာလဲ...။ ⇐ Cl
ကျွန်တော်တို့နှင့် လက်တွဲ၍ ဒစ်ဂျစ်တယ် ခရီးကြမ်းကို ဆန်တက်လျက်ရှိသော မိသားစုဝင် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကို အလေးအနက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ။
D-Royal Dental Aesthetic And Implant Center
SEO & SEM, Web Development
Smile Up Dental Care Clinic
Singular Myanmar | Travel & Tours Co.,Ltd.
Facebook Marketing, Web Development
Vision Care Eye Center
Royal Lin Marble&Granite
KMK Material Trading
မိတ်ဆွေလိုအပ်တဲ့ အကျိုးအမြတ်နဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် မှန်ကန်ထိရောက်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှု၊ သင့်လျော်ချိုသာသည့် နှုန်းထားဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါသည်။
လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော Website ကို သင့်တင့်သော ဈေးနှုန်း၊ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှု၊ အားကောင်းသော Content Management System၊ မည်သည့် Digital Device ၌ဖြစ်စေ လိုက်လျောညီထွေရှိသော ဒီဇိုင်းစသည်တို့ဖြင့် ရေးဆွဲပေးပါသည်။
Website ကို ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိပဲ Update မဖြစ်ပါက Hacking အန္တရာယ်နှင့် Customers တို့၏ မနှစ်မြို့မှုကို တွေ့ကြုံနိုင်ပြီး သစ်လွင်သော Content Management နှင့် Active ဖြစ်စေရန် ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
Customized web app နှင့် Mobile App များကို မိတ်ဆွေ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ စနစ်များဖြင့် ပြည့်မှီအောင် ရေးဆွဲပေးပါသည်။ မြန်နှုန်းမြင့် Optimization ပိုင်းကို အထူး အလေးပေး ရေးသားပြီး၊ ဝန်ဆောင်မှု အားကောင်းသည့် Server များနှင့် ချိတ်ဆက် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
Facebook Platform ပေါ်တွင် လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်အပ်သော Marketing Strategy၊ ရေရှည်တည်တံ့သော Branding နှင့် ထိရောက်မှန်ကန်သော Content Marketing တို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိသည်။
အွန်လိုင်းမှ တဆင့် ကုန်ပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြည်တွင်း ပြည်ပသို့ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်သည့် Online Shopping website နှင့်အတူ Mobile App များကိုပါ Online Payment Gateway များ ဖြစ်သော MPU, Master, Visa များဖြင့် ချိတ်ဆက်တပ်ဆင် ရေးသားပေးပါသည်။
Website ကို Search Engine မှတဆင့် လူဝင်ရောက်နှုန်း မြှင့်တင်နိုင်ရန်၊ လုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သော Keywords တို့ကို Customers မှရှာဖွေရာတွင် Result Pages များအကြား First Page ၌ပါဝင်ပြီး ထိပ်သီးတွင် နေရာယူနိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
Digital Marketing ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပိုပြီး လေ့လာနိုင်ရန်
Myanmar Digital Marketing နှင့် လက်တွဲအလုပ်လုပ်ရာ၌ တွေ့ကြုံခံစားမှုများကို အပြုသဘောဆောင်စွာ အကြံပြုပေးပါသော မိသားစုဝင်များကို ကြိုဆိုလျက်ရှိပါသည် ခင်ဗျာ။
We awfully satisfy with our website that is developed by Hap Eye Digital Marketing Agency. They really respect and fast response to customer's demands. I fully pleasant with their service even though I am so difficult to get satisfy. Mostly, I like them is very fast response to customer's requirements with respectfully discuss and take action. "May success more and more."
Dr. Ye Hein Aung
One of my best friends from Yangon introduced me with Myanmar Digital Marketing, HapEye. Luckily I met with Ko Thit Oo the founder of HapEye. He has great creativities in website and he suggested mealot of things I was not even aware of. Their team is excellent and amazing. Last but not least, Ko Thit Oo has the excellent sense of humor.
Ko Toe Toe
Myanmar Digital Marketing powered by HapEye.Com has been developed our website since4years, that is msmyanmar.net and their development team is very creative and powerful.
SUBSCRIBE TO OUR MOVEMENTS
Myanmar ရဲ့ Digital Marketing ရွေ့လျားမှုနဲ့ မျက်ခြေမပြတ်စေဖို့ ကျွန်တော်တို့ကို တာဝန်ပေးအပ်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
၂၁ရာစု၏ ဆယ်ဂဏန်း ကျော်လာသည်နှင့် ပြည်တွင်း အင်တာနက်သုံးသူ တဟုန်ထိုး မြင့်တက်လာပါသည်။
ဤအချိန်အခါတွင် Digital လှိုင်းဂယက်ကို တိုးဝင်ရန် မဖြစ်မနေ လိုအပ်လာသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ “Myanmar Digital Marketing” သည် ရပ်တည်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဆန်းပြားသစ်လွင်တဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေက မိတ်ဆွေကို သမာရိုးကျ မဲပြာပုဆိုးတွေနဲ့ ကွဲပြားစေမှာဖြစ်ပြီး ဈေးကွက်အတွင်းမှာ သူတစ်လူငါတစ်မင်း စစ်ခင်းနိုင်ဖို့အတွက် အကူအညီဖြစ်စေမှာပါ။
မိတ်ဆွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်အား စိုက်ထုတ်မှုတွေကို မှန်ကန်သင့်လျော်တဲ့ နည်းဗျူဟာမှတဆင့် ထိရောက်သေချာမှုရှိတဲ့ ရလဒ်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
အတွေ့အကြုံရင့်သန်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှု အားကောင်းတဲ့ Passionate Professional အစုအဖွဲ့က လုပ်ငန်းရဲ့ ချဲ့ထွင်နိုင်စွမ်းအတွက် ခေါင်းစားခံကြမှာဖြစ်တာကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိစွာ လက်တွဲအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
မိသားစုကဲ့သို့ နွေးထွေးမှု၊ သာလွန်ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးဖြင့် ရေရှည်လက်တွဲရေးကို ရှေးရှု၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။
အစဉ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ Digital Trends ကိုမူတည်ပြီး မတူကွဲပြားတဲ့ Digital Platform တွေပေါ်မှာ ရပ်တည်နိုင်စေဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် Solution များကို အခါအားလျော်စွာ ရှာဖွေလျက်ရှိပါတယ်။
မိတ်ဆွေအတွက် အားကောင်းခိုင်မာတဲ့ Online Presence အားဖြင့် Brand Image ကိုတည်ဆောက်ပေးပြီး သင့်လျော်မှန်ကန်တဲ့ Audience ဆီမှ ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ Awareness ကိုရရှိစေပါတယ်။
မှန်ကန်တိကျပြီး အပြုသဘောဆန်တဲ့ ရလဒ်တွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အားထုတ်မှုကို လက်တွေ့တိုင်းတာနိုင်ပြီး ရှေ့ဆက်ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို မြင်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အီးမေးလ် တစ်စောင်၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု တစ်ခု၊ ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့ မဆို ကျွန်တော်တို့ကို ဆက်သွယ်ပြီး သိချင် လိုချင်သည်များကို စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
85, Moe Thauk Pan Street,
+95 (09) 2598 147 68
ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး မိတ်ဆွေရဲ့ လုပ်ငန်း အောင်မြင်တိုးတက်မှုများအတွက် မရှိမဖြစ်တဲ့ မားကတ်တင်းနည်းလမ်းများကို ရယူနိုင်ပါပြီ။
© Copyright 2019. All Rights Reserved & Powered by Hap Eye Co., Ltd.